Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » Xorriyaddaha internetka ayaa aad hoos ugu dhacaya sannadkii 11aad oo xiriir ah
Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Crime • dhaqanka • Education • Wararka Masar • Entertainment • Films • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • Iceland News Breaking News • LGBTQ • Music • Wararka Burburinta Myanmar • News • Dadka • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Jabinta Vietnam
Wadar ahaan, ugu yaraan 20 dal ayaa xannibay gelitaanka Internetka ee dadka intii u dhexeysay Juun 2020 iyo May 2021, muddadii uu daboolay sahanku.
Isticmaalayaasha internetka adduunka oo dhan waxay la kulmaan dhibaateyn, xarig iyo weerar jidheed oo ku aaddan dhaqdhaqaaqooda internetka.
Warbixinta Xorriyadda Shabakadu waxay waddammada siisaa dhibco ka mid ah 100 heerka xorriyadda internetka ee ay muwaadiniintu ku raaxaystaan.
Sannadkii 2021, adeegsadayaashu waxay la kulmeen weerar jidheed oo aargudasho ah boggooda internetka ee 41 dal.
Xorriyadda khadka tooska ah ayaa hoos u dhacday adduunka oo dhan sannadkii 11 -aad oo xiriir ah, sida lagu sheegay warbixinta “Xorriyadda Shabakadda” ee sannadlaha ah, oo maanta la daabacay.
Rinjiyeynta sawirka xun ee xorriyadaha dijitaalka ah sannadka 2021, warbixintu waxay sheegtay in adeegsadayaasha Internet -ka ee tirada sii kordhaysa ee waddammada ay la kulmeen dhibaateyn, xabsi, cadaadis sharci, weerar jidheed iyo dhimasho howlahoodii khadka tooska ahaa ee sanadkii la soo dhaafay.
Warbixintu waxay sheegtay in xiritaanka Internet -ka ee Myanmar iyo Belarus ay caddeeyeen dhibco hoose oo gaar ah oo ku saabsan qaabka dhibta leh ee yareynta xorriyadda hadalka ee internetka.
Waxaa soo uruuriyay Freedom House-ka Mareykanka, warbixintu waxay siineysaa waddammada dhibco ka mid ah 100 heerka xorriyadda internetka ee ay ku raaxaystaan ​​muwaadiniintu, oo ay ku jirto xaddiga ay la kulmayaan xannibaadyo ku saabsan waxyaabaha ay heli karaan.
Waxyaalaha kale waxaa ka mid ah haddii trolls-ka dowladda taageersan ay rabaan inay wax ka qabtaan doodaha internetka.
"Sannadkan, adeegsadayaashu waxay la kulmeen weerar jidheed oo ay kaga aargoosanayaan waxqabadkooda khadka tooska ah ee 41 waddan," ayaa lagu yiri warbixinta, "rikoor aad u sarreeya" tan iyo markii raadraaca la bilaabay 11 sano ka hor.
Tusaalooyinka waxaa ka mid ahaa arday Bangladesh u dhashay oo isbitaal la dhigey ka dib markii lagu garaacay "dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah dowladda" baraha bulshada, iyo saxafi reer Meksiko ah oo la dilay kadib markii uu soo dhigay fiidiyoow Facebook ah oo ku eedeynaya koox burcad ah oo dil ah.
Sidoo kale, dadka ayaa lagu xiray ama lagu xukumay dhaqdhaqaaqyadooda internetka 56 ka mid ah 70 -ka dal ee warbixintu qortay - waa boqolkiiba 80.
Waxay ku jireen laba saamile oo Masaari ah oo la xiray bishii Juun ee wadaagista fiidiyowyada TikTok ee ku dhiirrigeliyay haweenka inay xirfado ka sii wataan baraha warbaahinta bulshada.